तामाङ चलचित्रमा नयाँ सम्भावना: फ्यूबा – Dhadingnews.com – धादिङ जिल्लाको पहिलो डिजिटल पत्रिका
प्रकाशित मिति: ८ असार २०७३, बुधबार २३:१२
धादिङ दार्खामा जन्मिएका प्रदीप फ्युबा नयाँ नेपाली चलचित्र “हिमालकी रानी” बाट नेपाली चलचित्रमा डेब्यु गर्दैछन। मेडिकल व्यवसायी फ्यूबाले केही म्युजिक भिडियोमा समेत अभिनय गरिसकेका छन । रोशन फ्युबाद्वारा निर्देशित “हिमालकी रानी” को ९५% छायाङ्कन सकिएको छ । अब चलचित्र क्षेत्रमै केही गर्ने सोच बनाएका फ्युबासँग धादिङ न्युज डट कमका लागि बुद्धिमान वाइबाले गरेको संक्षिप्त कुराकानी –
-स्वागत छ प्रदिप जी धादिङ न्युज डट कममा
-कलाकार बन्ने रहर कहाँबाट पलायो?
मोडलिङ मेरो सौख हो। केही म्युजिक भिडियोमा काम गरें। फिल्म खेल्छु होला भन्ने सोच थिएन तर रोशनजीले हिमालकी रानीमा मेल लिडिङ रोल गर्नु पर्‍यो भन्नु भो। स्क्रिप्ट राम्रो लाग्यो । वास्तविक कथावस्तु भएको हुनाले मैले गर्छु भनें। रहर त थियो नै तर मौकाको पर्खाइमा पनि थिएँ।
-म्युजिक भिडियोमा गर्ने अभिनय र चलचित्रको अभिनयमा कस्तो फरक पाउनु भो? काम गर्न कत्तिको सजिलो महसुस गरियो?
म सबैसँग सजिलै घुलमिल हुन सक्ने प्रकृतिको मान्छे हुनाले पनि त्यस्तो लाज लाग्ने, अप्ठ्यारो लाग्ने फील भएन। आत्मविश्वास पनि थियो गर्न सक्छु भन्ने , त्यसैले म्युजिक भिडियो र फिल्म दुइटैमा गाह्रो भएन। मैले बेस्ट दिने कोशीस गरेको छु।
-क्वीन अफ हिमालय अर्थात हिमालकी रानीमा तपाईंको भूमिकाको बारेमा केही बताइदिनुस्न ।
हुन त सबै कुरा फिल्म हेरिसके पछी नै थाहा हुन्छ, सबै अहिले नै भनिहाल्न मिल्दैन तर यती भन्छु म एउटा गोठालोको छोरा काठमण्डौंमा ईन्जिनियर पढ्दै गरेको शिक्षित युवाको भूमिकामा छु। तामाङ समाजअंा रहेको मर्पा र तोर्पा बिचको डिस्क्रिमिनेसनको अन्त्य गर्ने कोशीस पनि गरेका छौं।
-नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीको एक दिग्गज कलाकार तथा क्याप्टेन विजय लामासँग काम गर्दै हुनुहुन्छ, कस्तो महसुस गर्नु भएको छ?
म एकदमै एक्साइटेड छु मैले पहिलो काम नै उहाँसँग गर्न पाएकोमा। अझै उहाँसँगको शुट हुन बाँकी नै छ । मैले धेरै कुरा सिक्न पाउनेछु ।
-कत्तिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?
छोटो समयमा हामीले धेरै काम गर्‍यौं । बिहान ५ बजे देखी बेलुका ८ बजे सम्म हामी काममै हुन्थ्यौ। म सन्तुष्ट र आशावादी दुइटै छु।
-फिल्म शूटिङ अवधीमा त्यस्तो कुनै बिर्सिन नसकिने पल केही छ?
हिरोइन र म भाग्नु पर्ने द्रिश्य गर्नु पर्ने थियो । हामी तयार भयौं । मैले भारी बोकेको थिएँ र भाग्ने क्रममा भीरको छेउमा लड्नु पर्ने थियो तर दौडेर जाँदा साँच्चिकै लडियो। मैले बोकेको भारी भीरबाट खस्यो। मेरो खुट्टा मर्कियो। थ्याङ्क गड धन्न भारीसङ्गै लडिएन। दुई दिन रेस्ट गरे पछी बल्ल काममा फर्किएँ।
-भविष्यमा प्रदीप फ्युबालाई अर्को फिल्ममा देख्न सकिन्छ ?
लेट्स सी, पहिलो फिल्मबाट कस्तो फिड्ब्याक आउँछ।
अब केही सर्ट्कट
-मन पर्ने हिरो
-मन पर्ने हिरोइन
रिचा शर्मा “उमा”
-मन पर्ने ठाउँ
-मन पर्ने खाना
-प्रेम के हो?
जीवन निरन्तरताको एउटा प्रकृया
-जीवन के हो त ?
-पर्मेश्वरले दिनु भएको अनुपम उपहार
-अन्त्यमा धादिङ न्युज डट काम मार्फत दर्शकहरुलाई केही भन्न चाहनुहुन्छ ?
हामीले यस फिल्ममा धेरै दु:ख गरेका छौं। ल्हाप्साङ्कर्पो क्षेत्रमा रहेको हिमाली भेगको कथा व्यथालाई जस्ताको तस्तै पर्दामा उतार्ने प्रयास गरेका छौं। फिल्म हेरेर सल्लाह सुझाव दिनुहुनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु। र हजुरहरुको धेरै माया पाउँने आशा राखेको छु।
८ असार २०७३, बुधबार २३:१२ मा प्रकाशित